महिला नेतृत्वको उपेक्षा पुरुष कि महिलाबाट ? यस्तो छ तथ्य | Citizen Post News
महिलाविरुद्ध यौनजन्य हिंसा नेपालको मात्र नभएर विश्वकै समस्या बन्न थालेको छ । महिला हिंसा विरुद्ध ह्यासट्याग 'मि टू' र ह्यासट्याग 'टाईम्स अप' जस्ता अभियान समाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर चलिरहेका छन् । यस्ता अभियानले महिलाको सामाजिक विकास गर्ने संसारभरका महिलालाई एकतावद्ध गराउने लहरको समेत थालनी गरेको छ ।
तर, महिला विरुद्धका हिंसा पितृसतात्मक सोचका कारण पुरुषद्धारा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता अहिलेको अवस्थामा मेल खादैन । पछिल्लो समय विभिन्न पेशा, रोजगारी तथा कार्यक्षेत्रमा संलग्न महिला कर्मचारी तथा व्यवसायिक व्यक्तित्वहरुले पूरुष सहकर्मीबाट खेप्नुपरेको यौन हिंसा, अश्लिल छेडछाड जस्ता विषयमा मात्र चर्चा मात्र नभई महिलाद्धारा महिला कर्मचारीमाथि हुने शोषण र दमनबारे पनि कुरा उठ्न थालेका छन् । यद्यपि महिला कर्मचारीले माहिला कर्मचारीलाई गरेका उपेक्षाबारे भने अझै मुख खोल्ने वातावरणको विकास भइसकेको छैन् ।
यस्तो छ तथ्य:
कोही समयअघि अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार कार्यालय समयभित्र एक महिला कर्मचारीले अन्य महिला सहकर्मीहरुलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी समय दमन गरिरहेका हुन्छन् । महिलाहरुमा हाबी हुने महिलाप्रतिको अचेत पूर्वाग्रहको कारण यस्तो अवस्था आएको अमेरिकी संस्था द वर्कप्लेस बुलिईङ्ग इन्स्टिच्युटले जनाएको छ ।
सो अध्ययनले कार्यालयभित्र दुई तिहाइ महिलाले अन्य महिला कर्मचारीहरुद्धारा नै प्रताडित हुनुपरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यसैगरी, सन् २००६ मा भएको एक अध्ययनमा कार्यथलोमा शोषित भएका महिलाहरुमध्ये करिव ५७ ले आफ्नै महिला सहकर्मीहरुद्धारा शोषणको सामना गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
विभिन्न अध्ययनहरुले करिब ६० प्रतिशत पूरुष कर्मचारीहरु बुलिइङ्ग क्रियाकलापमा संलग्न भएको र उनीहरुको शिकार महिला कर्मचारी भएता पनि यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न महिलाहरुको संख्या पनि कम नभएको र उनीहरुको प्रत्यक्ष शिकार आफूभन्दा तल्लो तह र तप्काका महिला सहकर्मीहरु नै हुने गरेको देखाएको छ ।
चर्चित पत्रिका फोब्र्सका अनुसार आफ्ना पुरुष सहकर्मीहरुसँग बराबरीको हैसियत हासिल गर्न तथा समानरुपमा अधिकार एवं शक्तिको अभ्यास गर्नका लागि महिलाहरुले दशकौंदेखि संघर्ष गरिरहेता पनि यस्ता संघर्षहरुले सोही अनुरुपको चुनौती ल्याउने गरेको छ । कार्यालयमा उँचो स्थान हासिल गर्न सफल महिला कर्मचारीहरुले प्रायजसो सो वातावरणमा टिकिराख्न र आफूलाई जोगाइराख्न थप आक्रामक नेतृत्वको शैलीको अवलम्बन गर्ने फोब्र्सको तर्क छ । अधिकारकर्मीहरुले यस्तो आक्रामक नेतृत्व शैलीलाई टक्सिक मास्कुलिनीटी (हानिकारक पुरुषत्व) नाम दिएका छन् ।
के हो टक्सिक मास्कुलिनीटी ?
अमेरिकी मानव संशाधन व्यवस्थापक ऐञ्जिलिक हेमिल्टनका अनुसार सफलरुपमा नेतृत्व प्रदान गर्न जब महिला कर्मचारी, सुपरिवेक्षक वा व्यवस्थापकहरुले आफ्ना समान तहका पूरुष कर्मचारीहरुको व्यवहारको सिको गर्ने प्रवृत्ति नै टक्सिक मास्कुलिनीटी हो । शुरु शुरुमा आफूलाई कडारुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि टक्सिक मास्कुलिनीटीको आचरण अंगिकार गरेतापनि यो अन्तत नेतृत्वको नकारात्मक शैलीको रुपमा विकसित हुन्छ ।
यसैगरी कन्फ्लिक्ट रिजोलुसन सेन्टरकी संस्थापक बिना पटेलको भनाइमा महिलाहरुले उपल्लो दर्जाका नेतृत्वकर्ताहरुको नजरमा टिकिराख्नका लागि उनीहरुको वास्तविक भावनात्मक अवस्थालाई त्याग्ने गर्दछन् । कार्यालयभित्र महिलाहरुले आफूजस्तै महिलाहरुको कारण त्रसित एवं असुरक्षित महसुस गरेका कारण उनीहरु एकअर्का बिरुद्ध खनिने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी अन्य महिला सहकर्मीहरुलाई प्रताडित गर्न नेतृहरु शक्ति र सम्मान हासिल गर्ने आफ्नै मनोवैज्ञानिक युद्धमा तल्लीन हुन्छन् । उनीहरुका लागि अन्य महिलाहरुलाई माथि उठ्न दिनु भनेको आफू तल गिर्नु सरह हो ।
नेपालमा पनि उस्तै छ प्रवृति:
'महिलाहरु महिलाकै साख्ये बन्न सग्दैनन् भने पुरुषले मात्र महिलामाथि हिंसा गर्छ भनेर वेतुकका कुरा किन गर्दा हुन् ? आफूले अधिकार पाएपछि अरुले पाउन् कि नपाउन् महिलाअधिकारकर्मीलाई के मतलव छ ? महिला अधिकार र विकासका खोक्रा आर्दश साँधेर आफ्नो पोल्टो भर्ने मात्र काम गरेका छन् उनीहरुले । खासमा महिलाले महिलालाई नै आफ्नो शत्रु ठान्छन र त उनीहरु झन् झन् पछि धकेलिएका हुन् ।'
यस्ता तर्क हाम्रो समाजमा पनि सर्वत्र सुनिन्छ । महिलाले खुलेआम महिला नेतृत्वको उपेक्षा नगरेपनि कोही महिला माथि पुगेको र अझै उसको अन्डरमा रहेर काम गर्न धेरैजसो महिलालाई कठिन नै हुन्छ । आफूले भोगेकोजस्तो अवस्था अरु महिलाले भोग्न नपरोस भन्ने सोच कमै मात्र महिलाको छ ।
'कहिले सासुको पालो काहिले कहिले बुहारीको पालो ।'
आधिकार दिने कुरामा होइन अवसर गुमाउने कुरामा यस्तो उद्गार लगाएर विश्लेशण गरिन्छ । अधिकारविहिन आफूभन्दा साना र कमजोर माथि शासन गर्ने होडबाजी महिलामै बढि देखिन्छ । महिलाहरुले अघि वढ्ने र अधिकार पाउने नाममा महिलामाथि नै ज्याजती गर्ने प्रवृति अझैपनि हावी छ । महिला अधिकारका र न्यायका लागि लड्छु भन्ने महिला पनि आफ्नो झोली भरिएपछि अन्तै हराउँछन् । ‘हाम्रो पनि दिन आउँछ नआत्तिनुस’ भनेर अधिकारविहीन महिलालाई जग बनाई माथि उक्लनेहरु माथि नै रहे ।
उपेक्षितलाई उकास्नु त कता हो कता आफ्नै वर्गको खेदो खन्न तल्लिन रहे ।
शक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि महिलाहरु एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । यसो गर्दा आफूजस्तै अर्की महिला उपेक्षित भएको भुसुक्कै विर्सन्छन् । उ भन्दा म ठूलो भन्ने भ्रमले एक अर्का विच वेमल भैरहन्छ । कमजोर भनिएकाहरुसँग शक्ति संरचना परिवर्तन गर्ने आँट हैसियत रहँदैन । त्यसैले त उनीहरु आफूमाथिको दमनको प्रतिकार नजिकको प्रतिद्वन्द्वीसँग गर्छन् । अनि आफूजस्तै वर्गमाथि हैकम चलाउछन् । शत्रुता जन्माउँछन् । यही प्रवृतिले महिला महिलाविच गलत र पूर्वाग्रही विचार स्थापित हुन्छ ।
कुरा ठूला काम इस्र्यालु:
केही दिनअघि काठमाडौंमा केही अधिकारकर्मी महिला भेला भएर महिला अधिकारकर्मीका संस्थाले उल्लेख्य काम गर्न नसकोको निचोड निकाले । उनीहरूले महिलाका आवाज सरकारसम्म सुन्ने बनाउन महिला महासंघ बनाउनुपर्ने निर्णय गरे । नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था नभएर सो निणय गरेका भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक अनुसार देशभर ५० हजार तीन सय ८५ वटा गैरसरकारी संस्था छन् । २०३४ सालदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मस दर्ता भएका ति संस्था मध्ये दुई हजारको हाराहारीमा मात्र क्रियाशिल छन् ।
यी मध्ये अधिकांशले महिलाका मुद्दामा काम गर्छन् ।
अव प्रश्न उठ्छ के ति संस्थाले साँच्चीकै महिला अधिकारको आवज उठाएका छन् त ? दुरदराजमा पुगेर माहिलाको पीडामा मलम लगाएका छन् त ? छन् भने किन अझैपनि छाउगोठमा महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ? वोक्सीको आरोपमा कुटिएका छन् ? दाइजोको निहुँमा प्रताडित छन् ? वास्तविकता त यो हो कि नेपालमा सञ्चालित एनजीओहरूको दीर्घकालिन नीति पनि छैन र कार्यशैली पनि छैन । नेतृत्वको व्यक्तिगत टकराब पनि उत्तिकै छ, एउटाले अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृति छ ।
जुन राष्ट्रिय महिला आयोगमा देख्न सकिन्छ । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय महिला आयोगमा महिलावीचको दम्भले अध्यक्ष छानिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा महिला अधिकारकमीहरुले पितृसत्ता र पुरुषबादी सोचका कारण महिला पछि भन्नु तर्कसंगत छैन । महिलामाथि हिंसा र विभेदजन्य हरेक घटनाका अन्तरनिहित कारकतत्व केलाउन सके र त्यसको उचित विश्लेषणसहित सम्बोधन गर्नसके मात्रै महिला अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पुरुष वा पितृसत्तालाई मात्र दोष दिएर महिला अधिकारको जग बसाल्न खोज्दा खास अधिकार पाउनुपर्ने वर्गको अधिकार भासिदै गएको छ । हाम्रो आनीबानी र व्यवहार सुधारिएको छैन । समाज सभ्य होईन, झन् बर्बर बन्दै गएको छ । त्यसैले महिला पुरुषको समविकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न र महिला विरुद्धका विभिेद अन्त्य गर्न पहिले त महिला नै महिलाको हितैषी बन्न सक्नुपर्छ । होईन भने जमाना परिवर्तन हुन्छ, अधिकार खोस्न सक्नेले अधिकार प्राप्त पनि गर्न सक्छन । तर कमजोर वर्ग सधैँको पछाडी नै रहन्छन् ।